သကျတနျ့ခြို: February 2011
Posted by သက်တန့်ချို at 10:36 AM3comments:
“ နင် ” ဖြစ်တယ်ဆိုတာ...
“ နင် ” ဖြစ်တယ်ဆိုတာ.....
Posted by သက်တန့်ချို at 10:32 AM2comments:
တို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ “ ကစားပွဲ ” မှာ
လှပပြီး သေနိုင်တဲ့ အကွက်တွေ
(၀င်ပါဖို့ စိတ်ကူးမရှိပေမယ့် )
“ နင့်အပြုံးတစ်ပွင့်ကို မြင်ရဖို့ပဲကွယ် ”
Posted by သက်တန့်ချို at 10:27 AM2comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:49 AM 13 comments:
ရာဇ၀င် တို့ ခမ်းနားလွန်းတယ်....
Posted by သက်တန့်ချို at 2:00 PM3comments:
စိန်စီသော လက်ကိုင်အိတ်လို့ပဲတင်စားရမလား ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါ၇ီ ၂၀ ရက်နေ့မှာ Doha မှာပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲမှာ အမျိုးသားတစ်ဦးကဈေးအကြီးဆုံး စိန်စီလက်ကိုင် အိတ်ကိုပြသနေ ပုံဖြစ် ပါတယ် ။အဲဒီလက်ကိုင်အိတ်နာမည်က The Mouawad 1001 Nights Diamond Purse တဲ့ ..။ ဈေး ကလည်းကြီးကဗျာကလည်းဆန်လိုက်တာ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:55 PM No comments:
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ၇က်နေ့မှာ တရုတ်ပြည် ဘေဂျင်းမြို့မှ 798 Art Zone လို့ အမည်ရတဲ့ outdoor ပြပွှဲတစ်ခုမှာ ကားပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ထားတဲ့အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကိုပြသနေပုံဖြစ်ပါတယ် ။ အုတ်ခဲတွေနဲ့ပြု လုပ် ထားပြီး ၆.၅ တန်အလေးချိန်ရှိပါတယ် ။ ဘိလပ်မြေအနည်းငယ်နဲ့အုတ်ခဲတွေကို ဖန်တီးထားပြီး စတီး လက်ရမ်းတွေ တက်ဆင်ထားပါတယ် ။ ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်အနုပညာလက်ရာကိုခံစားကြည့်ကြပါစို့ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:38 PM No comments:
အို.......ဟိုး.....အဝေးမှာ.........
လွမ်းတယ်...လွ မ်း တ ယ် ..လွ မ်းတ ယ် . . . ။
လူတစ်ချို့ အချစ်ကို ရှာဖွေတယ်...
လူတစ်ချို့ သံယောဇဉ်ကို ရှာဖွေတယ်...
လူတစ်ချို့ လူတစ်ချို့ဆီက ရနိုင်သမျှ ရှာဖွေကြတယ်
နင်ကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီတချို့နဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်
ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့ ငါကြိုနေမယ် .....။
ဘလော့မှာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ လူလည်းရေငုပ်နေရသလိုပါပဲ ။ ဟိုး....အရင်ဘလော့တွေ စစချင်းခေတ် စားတုန်းကပေါ့ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်က ။ အမှန်တော့ဘလော့ ပေါ်နေတာကြာပါပြီ ဒီမှာ လူသိပ်မသိသေးတာပါ ။ အဲဒီတုန်းကဘလော့မှာ စာရေးကောင်းသူတွေ လည်းရှိသလို ပေါက်ကရတွေလည်းရှိရဲ့ ။ အရမ်းသွေးစည်းခဲ့တဲ့ မောင်နှမတွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ အဖြူရောင်နတ်သမီး ၊ မေလေး ၊ ရန်ကုန်သား ၊ နိုင်းနိုင်းစနေ ၊ သားကြီး ၊ ကိုလူထွေး ၊ မိုးငွေ့ ၊ ၀က်ဝံလေး ၊ အိန်ဂျုယ်ရှားပါး ၊ ကိုပီတာ အို..အစုံပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ့
ဘလော့တွေ အပြိုင်ရေးခဲ့ကြတယ် ။ ရင်ခုန်သံချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ် ။ အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ် ။ ကျနော်ဒီဘလော့လေးမလုပ်ခင်တုန်းက Ning မှာလည်းသက်တန့်ချိုဆိုပြီးလုပ်ဖူးပါတယ် ။ အဲဒီတုန်းက အဖြူရောင်နတ်သမီးတို့ မေလေးတို့ ၀က်ဝံလေးတို့ မန်ဘာ လာဝင်ပြီး အားပေးခဲ့ကြတယ် ။ နောက်ပြီး ဘလော့စပေါ့ကို ရောက်လာတော့လည်း သူတို့က ဆက်ပြီးအားပေးမြဲပါပဲ ။
ပထမဆုံးစသိတဲ့ ဘလော့ ပိုင်ရှင်ကတော့ အဖြူရောင်နတ်သမီးတဲ့ ။ ပထမတော့ ကျနော်သူ့ကို ၁၈ နှစ်လောက် ပဲထင်ခဲ့တာ ။နောက်မှ အစ်မကြီးမှန်းသိလာခဲ့တာ ။ အစ်မအဖြူရောင်နတ်သမီးကို မလိုသူတွေရော တိုက်ခိုက်သူတွေရော အများကြီးရှိခဲ့တယ် ။ အဲဒီတုန်းကပေါ့ ။ ဒီတော့မခံနိုင်သူတွေက အစ်မဖက်က ရပ်တည်ပြီး ဘလော့တွေတင်ပြီး အမှန်တရားကိုရှာဖွေခဲ့ကြတယ် ။ (ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်ပေါ့) ။
နောက်ပိုင်း.. .နောက်ပိုင်းကျနော် အလုပ်တွေ..အလုပ်တွေပိ နောက်ကွန်နက်ရှင်မရ ပရောက်ဆီတွေကျိုး ဘာမှအဆင်မပြေတော့ကျနော် social network ဖက်ကို ရောက်သွားတယ် ။ ဘလော့ ဖက်ကိုအားနည်းသွားတယ် ။ ကိုယ့်ဘလော့လာလည်တဲ့သူဆီကို နှုတ်ဆက်စကားတောင် ပြန်သွား မပြောနိုင်တော့ ဘူး ။ Freedom က အရမ်းနှေးတော့သုံးရအဆင်မပြေဘူး ။ Ultrasurf ကလည်း တစ်အိမ်ချင်းစီလိုက်လည်ဖို့ အဆင်မပြေပြန်ဘူး ။ Freegate ကတော့ ဘလော့လည်တာ အရမ်းမြန်တယ် ။ အားနည်းချက်ကတော့ .com နဲ့ cboxတွေဖွင့်မရပြန်ဘူး ။ အဲဒလိုတွေ ။ ထားပါတော့ ကျနော် အဖြူရောင်နတ်သမီးဆိုတဲ့ အစ်မကြီးဆီသူလာလည်လည်းပြန်မလည်ဖြစ် ဘယ်သူ့ဆီမှ လည်းမလည်ဖြစ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေမိတယ် ။
ဟိုတစ်နေ့ကကွန်းမန့်မှာ အစ်မကကျနော့်ကိုစိတ်ဆိုးနေတယ် ဟီး ။ သူ့ကို ပစ်ထားလို့ သူကလည်းခပ်စိမ်းစိမ်း ပဲနေမယ်တဲ့ ။ ၀မ်းနည်းလိုက်တာဗျာအ ရမ်းပဲ သိလား ။ ကျနော် အစ်မကို အရမ်းခင်ပါတယ် ။ သူများတွေသူ့ကို တိုက်ခိုက်တော့ကျနော်ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်ခဲ့ဘူး ။ အခုနောက်ပိုင်း ကျနော်ပစ်ထားသလို ဖြစ်သွားမိသလားတော့မသိဘူး ။ ဒါကြောင့်အစ်မနဲ့တကွ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အနူး အညွတ်ပဲတောင်း ပန်ပါတယ် ။ ကျနော့်ကိုခွှင့်လွှတ်ပေးပါ ။ မြန်မာပြည်ကမို့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဘူး ။ အလုပ်ထဲကမို့ စိတ်ရောက်ပေ မယ့်လိုင်းပေါ်မရောက်ဘူး ။ အစ်မရေ စကားနဲ့ပြောရင် အရာမထင်မှာစိုးလို့ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ တောင်းပန်လိုက်တယ် ။
(ဒါနဲ့စကားမစပ် မင်္ဂလာဆောင်ရင်ဖိတ်စာပို့ဦး အစ်မနဲ့တကွ သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ )
(အစ်မက သူဘယ်လောက်ခံစားရသလဲဆိုတာပြောသွားတာကျနော် ...ပြန်မပြောတတ်လောက်အောင်ပါပဲ .... အစ်မနဲ့သူငယ်ချင်းများ နေကောင်းကျန်းမာပါစေနော် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဘလော့ကိုမြဲချစ်လျှက်ပါပဲ ဘလော့နဲ့ပါတ်သတ်သမျှ အရာအားလုံးကို သတိရလျှက်ပါပဲ )
Posted by သက်တန့်ချို at 4:36 PM2comments:
ဒီ “ မိုး ” တဲ့လားကွယ်
“ ကြယ် ” တွေကိုဖန်ဆင်းလို့....။
တိမ်တွေကပဲ လကိုဖုံးအုပ်ခဲ့သလား ?
လကပဲ တိမ်တွေထဲ ပြေးပုန်းခဲ့လေသလား ?
ဘ၀က “ ခါး ” ခဲ့တာကြာပြီ ......။
“ ကြယ် ” တွေကိုဖန်ဆင်းပစ်မယ်ကွယ်....။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:31 PM 1 comment:
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့မှာ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း Guangxi Zhuang ပြည်နယ် ၊ Rongrui မှာ မြင်းတိုက်ပွဲတစ်ခုကို အားပေးနေသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုမြင်းတိုက်ပွဲကို Rongshui မှာ လာမယ့် Lantern ပွဲတောင်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ ကျွဲတိုက်ပွဲတော့တွေ့ဖူးပါရဲ့ မြင်းတွေတိုက် တာတော့အခုမှ ပဲတွေ့ ဖူးတော့တယ် ။ ထူးဆန်းပါပေါ့ ကိုတရုတ်ရယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:03 AM6comments:
Site verified to be secure and free of malware
အလုပ်ကိစ္စရယ် တခြားထွေလီကာလီကိစ္စတွေကြောင့် ဘလော့ကို နေ့တိုင်းတင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတော့ ဘလော့တွေမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကိုပါကိုသက်တန့်တစ်ယောက် မျက်ချေပြတ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီနေ့မ နက်မှ လိုင်းလေးကောင်းတုန်း Freegate နဲ့ Ultrasurf လေးသုံးပြီး ဘလော့လေးလည်မယ်ပေါ့ ။ ပထမဆုံးပဲ အစ်မကြီး အဖြူရောင်နတ်သမီးဆီရောက်သွားပါတယ် ။မရောက်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီကိုး ။ အစ်မကြီး တစ်ယောက် အချစ်ကဗျာတွေရေးနေတုန်းပဲလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ :P ။ အဲဒီမှာတင် သူ့ရဲ့ Blog List မှာ ကျနော့် လင့် ကိုရှာတာမတွေ့ဘူးဗျ ။ ဒီတော့ငါ့ကို တမင်ဖြုတ်ထားတာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့ အကြောင်း တစ်ခုခုတော့ ရှိမယ်ဆိုပြီးအောက်ကပို့စ်တွေဖတ်ကြည့်တော့မှ လားလား တုပ်ကွေးရောဂါတွေဖြစ်နေကြတာကိုး ။ ဒီတော့ သူပေးတဲ့လင့်လေးကို ကြည့်ပြီး ကိုလင်းထက်ဆီရောက်သွားပါတယ် ။အဲဒီမှာပေးတဲ့လင့်လေးကို စမ်းကြည့် လိုက်တာ အောင်မလေးဗျာ...နီရဲတွတ်နေတာပဲ ပိုးတွေပိုးတွေ ...ဟီး ။ အဲဒါနဲ့သူပြောတဲအတွင်းside bar ကိုရှင်းပြီး re-scan ပြန်လုပ်ကြည့်မှ ပိုးကင်းစင်သွားပါတယ် ။ ကဲ အားလုံးပဲ ကိုယ့် ဘလော့လေး မပျောက် ပျက်ရေး ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ကြပါစို့ ။
ကိုယ့်ဘလော့လေးကို ပိုးရှိမရှိစစ်ချင်ရင်အောက်ကလင့်လေးကို နှိပ်ပါ ။
အကယ်၍ Blacklist ဖြစ်နေရင်တော့ အောက်ကလင့်လေးကို နှိပ်ပြီးဖြေရှင်းကြည့်ပါ ။
ဒီလင့်တွေအကုန်လုံးကိုလင်းထက်ဆီက နေရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ပြန်လည် share လုပ်ခွင့်ပြုပါ ကိုလင်းထက်ရေ ။
Thanks : http://seaandangel.blogspot.com/ (ဒါနဲ့ ...စကားမစပ်ပိုးကင်းသွားပြီနော် ပြန်ချိတ်ပေးဦး အစ်မကြီး နမ်းမ၀ :P)
Posted by သက်တန့်ချို at 2:14 PM2comments:
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဘန်ကောက်မြို့အရှေ့ဖက် ၁၅၀ ကီလိုမီတာ (မိုင်ကိုးဆယ်)ခန့်မှ Pattaya မှာ ကမ္ဘာ့အချိန်အကြာဆုံးအနမ်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီး အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ Akekachai Tiranarat ၄၂ နှစ်နဲ့သူ့ရဲ့ ချစ်သူ Raksana Taranarat ၃၁ နှစ်တို့ အနမ်းပျိုးနေကြပုံဖြစ်ပါတယ် ။ဒီပြိုင်ပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှ စတင်ပြီး စုံတွဲ ၁၄ တွဲပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရသွားတဲ့စုံတွဲကတော့ အရှည်အကြာ ဆုံးအနမ်း အဖြစ် ၄၆နာရီ ၂၄ မိနစ်နဲ့ ၉ စက္ကန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ တယ်လို့သိရပါတယ် ။ အော်..ဘယ်လိုများနမ်းကြပါလိမ့် ထမင်းမစားရေမသောက်ကြဘူးလားမသိဘူးနော် :P
Posted by သက်တန့်ချို at 11:35 AM3comments:
ကြွေ နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ စားပွဲတင်ပစ္စည်းပြပွဲ
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့မှာ တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း Hebei စီရင်စုမှ Tangshan မှ လက် ဆွဲမီး အိမ်ပြပွဲလို့ အမည်ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုမှာကြွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခြင်္သေ့ ရုပ်ကိုပြသနေပုံဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပြပွဲ မှာ စားပွဲတင်ကြွေ ချပ်ပေါင်း နှစ်သောင်းတစ်ထောင်ကို စုစည်းပြီးတော့ ကနေသောခြင်္သေ့ရုပ်များကို ပြုလုပ်ပြ သ ခဲ့ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:30 AM No comments:
Labels: ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ, အံ့သြဖွယ်ရာအနုပညာ
အဲဒီတစ်ညမှာ နူးညံ့တဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းတွေရှိတယ်
ဒီတစ်ညမှာ ငါ သက်သေဆိုမယ်
(ဒီကဗျာလေးကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အတွက် ရည်စူးပြီး ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်... အဲဒီကောင်မလေးဟာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှ ကဗျာတွေထဲက မိန်းမပျိုလည်းဖြစ်တယ် ....
အကောင်အထည်ဆုပ်ကိုင်ပြလို့မရပေမယ့် ညစဉ်ညတိုင်း ကဗျာထဲကမိန်းမပျိုဟာ ကျွန်တော့်နှလုံးသားရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာ စူးနစ်စိုက်ဝင်နေလေ့ရှိတယ် )
" ချစ်သူ "
ဒီလိုနဲ့...ဒီ လို နဲ့ .... ဒီ လို နဲ့ .......
မင်း စကားသံတွေ ငါလွမ်းတယ်
တို့တွေ.....တို့ တွေ . . . တို့ တွေ . . .
" လမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တောင်နှုတ်မဆက်ချင်ဘူး " တဲ့...
ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့
Posted by သက်တန့်ချို at 11:18 AM 8 comments: